Madaxweyne Buhari oo la kulmay gabdhihii Dapchi – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaMadaxweyne Buhari oo la kulmay gabdhihii Dapchi
Hiiraan Xog, Mar 23, 2018:- Boqol iyo lix gabdho ciyaal-iskuul ahaa iyo wiil ay afduubteen kooxda Boko Haram ayaa loo geeyay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari.
Waxay ka mid ahaayeen 105 gabdhood oo laga afduubtay Dapchi iyo labo dugsi hoose dhiganayay oo meel kale lagu afduubtay.
Dhammaantood jir ahaan way caafimaad qabaan, marka laga reebo afar la sheegay inay lugaha ka jabeen.
Madaxweynaha ayaa sheegay in gabdhahan si shuruud la`aan ah loo soo daayay.
Wuxuu xusay in maamulkiisa uu sameyn doono wax walba oo suurtogal ah si uu u hubiyo sii deynta dhammaan dadka lagu afduubtay dalkaasi, isagoo ugu baaqay Chibok ee weli afduubka loo haysto inaysan lumin rajada.
Wuxuu ka codsaday gabdhaha la soo badbaadiyay inay magaaladooda maraan oo aysan ka baqin in dhibaatooyin loo geysto.
Madaxweyne Buhari ayaa ku amray hay`adaha ammaanka inay hubiyaan ammaanka dhammaan iskuullada u nugul weerarrada noocaas oo kale ah, isagoo ka digay inaan la fududeysan doonin haddii dhacdooyinkan oo kale ay soo laabtaan.
Gabdhaha ayaa la filayaa in la talin dheeraad ah loo sameeyo kahor inta aan lagu wareejin waaliddiintooda.
Dalka Faransiiska Labo qof oo ku dhintay weerar ka dhacay Supermarket